Momba anay - Tianjin Shengtai International Trade Co., Ltd.
Tianjin Shengtai International Trade Co., Ltd. dia mpanondrana bisikileta herinaratra 10 taona, ao anatin'izany ny fampandrosoana sy ny famokarana, naorina tany Tianjin, Sina. Izahay izao dia mitazona ny faritra zotra TRANO MAIMAIM-POANA Tianjin PILOT eo ambanin'ny soritr'asa politika manokana sy ny tombony manokana ara-jeografika. Ho fanampin'izany, ny tsipika famokarana sy ny fitehirizana anay dia eo akaikin'ny Seranan'i Tianjin sy ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Tianjin-Binhai, izay tena mety amin'ny fitaterana. Ho an'ny vokatray: mitazona an'ity fahamarinana ity izahay hatoky tena fa afaka manamboatra vokatra azo antoka sy sarobidy miaraka amin'ny traikefa amin'ny orinasa 10 taona. Ho an'ny teknolojia misy anay: manana ekipa R&D tsy miankina izahay izay manome OEM sy ODM. Ary ho an'ny serivisinay: nataonay ny antsipiriany rehetra hanome fahafaham-po ny filan'ny mpanjifanay. Hatreto dia nanosika ny vokatra ho any amin'ny firenena 20 sy faritra toa an'i Vietnam, Singapore, Malaysia, Thailand, Filipina, Torkia, Indonezia ary ny faritra Afovoany Atsinanana izahay. Na izany aza, tsy nijanona tamin'ny lalan'ny "Going-out" mihitsy izahay. Miaraka amin'ny fahamendrehana sy ny fandresena fandresena mifanaraka amin'izany, manantena ny hiara-hiasa amin'ireo namana anatiny sy vahiny rehetra izahay ary hiara-mandroso.
Sehatry ny asa: varotra iraisam-pirenena; manafatra sy manondrana orinasa manohana ny tenany sy ny entana ary ny teknolojia; kojakoja ilaina isan'andro, vokatra mineraly, vokatra vy, akanjo, kiraro sy satroka, fitaovana enti-miasa sy vy, asa-tanana, vy, vokatra vita amin'ny hoditra, vokatra vita amin'ny hazo, fanaka, vokatra simika (tsy misy akora simika mampidi-doza), vokatra plastika, hazo, bisikileta ary faritra, fiara , kojakoja môtô, akora fananganana, seramika Fivarotana vokatra porselana
Tamin'ny 2021, ny Tianjin Shengtai International Trade Co., Ltd. dia natsangana nandritra ny 22 taona. Rehefa afaka 22 taona ny fiofanana sy ny tolona, ​​ankehitriny ny orinasanay dia orinasa feno mampiditra R & D, famolavolana sy famokarana. Mamelà ahy hampahafantatra ireo fanovana nitranga tao amin'ny orinasanay tato anatin'ny 22 taona.
Andalana fivoriambe ankapobeny
Tamin'ny taona 1999, nampahafantatra ny laharam-pivorian'ny fivoriambe voalohany izahay avy tany Alemana, ary tany am-piandohana dia nisy tsipika fivoriambe iray nahitana mpiasa latsaky ny 10.
Mamolavola sy mamolavola ireo sarin'ny bisikileta ananantsika
Tamin'ny taona 2000, nanomboka namolavola sy namolavola ny zana-bisikiletanay izahay. Fiovana lehibe io. Tsy mamokatra entam-bahoaka intsony izahay. Manana ny endriny ihany koa izahay ary mampihatra patanty ho an'ny volavolantsika manokana.
Ny laboratoara fampisehoana lohataona dia natsangana tao amin'ny ozininay.
Tamin'ny taona 2001, ny laboratoara fampisehoana lohataona dia natsangana tao amin'ny ozininay. Tamin'io taona io ihany dia nanomboka novokarina ny bisikileta misy mpitroka hatairana. Nanomboka tamin'izay dia niditra tao amin'ny tsenan'ny bisikileta an-tendrombohitra avo lenta izahay, miaraka amina vokatra maro samihafa mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpanjifa samihafa.
Nanomboka nampiasa ny teknolojia fanamafisam-peo vaovao
Tamin'ny taona 2002, nanomboka nampiasa ny teknolojia fantsom-bozaka mandeha ho azy vaovao izahay. Ny orinasanay dia nitazona hatrany ny fotoana, nandeha teo alohan'ny teknolojia famokarana, ary nitondra ny mpanjifanay traikefa hafa.
Ny faritry ny zavamaniry faharoa anay dia vita ary napetraka
Tamin'ny 2004, ny faritry ny zavamaniry faharoa dia vita ary nampiharina, nanitatra ny làlan'ny famokarana izahay, nampitombo ny famokarana ary nanompo ny mpanjifa bebe kokoa.
Nivoaka ny môtô elektrika voalohany tsy miankina an'ny orinasa
Tamin'ny 2007, nivoaka ny môtô elektrika tsy miankina voalohany an'ny orinasanay.Niditra tsena vaovao izahay ary manana tanjona vaovao. Tamin'ity taona ity dia tapa-kevitra ny hibodo toerana eo amin'ny tsenan'ny moto elektrika izahay.
Ny Laboratoara vaovao momba ny harafesina dia nividy fitaovana marobe ho an'ny vokatra azo amin'ny kalitaon'ny vokatra
Tamin'ny taona 2009, ny laboratoara fanadiovana vaovao dia nividy fitaovana marobe hahazoana tombony amin'ny kalitaon'ny vokatra. Ny kalitaon'ny vokatra dia ny fiainam-pandraharahana, izay ny finiavana nifikirantsika hatrany. Ny fanaraha-maso ny kalitao dia lasa matihanina hatrany. Hatramin'izao dia nanolo-tena hanamboatra ny kalitaon'ny vokatra avo lenta kokoa izahay.
Ny orinasanay dia nandray anjara tamin'ny fampirantiana voalohany, niova avy amin'ny orinasa mpamokatra entana ka hatramin'ny mpamokatra.
Tamin'ny taona 2010, ny orinasanay dia nandray anjara tamin'ny fampirantiana voalohany, niova avy amin'ny orinasa mpamokatra entana ka hatramin'ny mpamokatra. Mpivarotra. amin'ity taona ity ihany, ny orinasanay dia nanangana ny mpanjifa vahiny voalohany. Ny varotra iraisam-pirenena dia tsena tsy maintsy hidiran'ny orinasa tsirairay. Manoloana an'izao tontolo izao ary tonga mpamatsy mpanjifa vahiny maro kokoa, dia niezaka nanome an'izao tontolo izao ny vokatra avo lenta vita tany Shina izahay.
Ny vokatra totalin'ny orinasanay dia mihoatra ny iray tapitrisa tapitrisa
Tamin'ny 2011, iray tapitrisa mahery ny totalin'ny vokatra navoakan'ny orinasanay. Lisitry ny vokatra mihoatra ny 10, maherin'ny 100 ny style.Ny fironana amin'ny fanatontoloana ara-barotra iraisam-pirenena dia mihamazava hatrany. Miaraka amin'ny faneken'ny mpanjifanay ny vokatra, mihalehibe sy midadasika kokoa ny tsenanay. Ny vokatra vita any Shina dia eken'ny olona eran'izao tontolo izao.
Ny faritra fananganana fahatelo an'ny orinasanay dia napetraka ho anay
Tamin'ny 2014, ny faritra fananganana fahatelo an'ny orinasanay dia nampiasaina, ny tsipika famokarana roa voalohany dia tsy afaka mamaly ny fangatahan'ny kaomandy misimisy kokoa. Tokony hanamafy ny famokarana isika, hanafohezana ny fotoana fandefasana, hanompo bebe kokoa ny mpanjifa ary hitondra ny serivisy mety indrindra amin'ny mpanjifa.
Ny orinasanay dia nanondrana mihoatra ny roanjato sy arivo ny vokatra
Tamin'ny taona 2017, ny orinasanay dia nanondrana mihoatra ny roanjato sy arivo ny vokatra vokariny. Nahavita zava-bita miavaka izahay, izay miankina amin'ny fifehezana kalitao henjana sy kalitaon'ny serivisy avo lenta. Ny mpanjifa dia afa-po bebe kokoa amintsika, izay mampitombo sy mihabe ny orinasantsika. Tamin'ity taona ity, nanao ny dingana avo lenta ny volan'ny kaomandinay.
Fampandrosoana sy famolavolana bisikileta an-tendrombohitra
Tamin'ny 2021, ny orinasanay dia nahavita ny fampivoarana sy ny famolavolana bisikileta an-tendrombohitra bateria lithium marobe, ary manana mpanjifa marobe any Amerika Avaratra sy firenena eropeana sasany. Izahay no lohalaharana hatrany amin'ny tsena vaovao, mahita ny fotoana farany azon'ny orinasa atao, mitondra tsena lehibe kokoa amin'ny orinasanay, ary manampy ny mpanjifanay haka ny tsena ao amin'ny fireneny.